Ụbọchị My Pet » The Bedlam Farm ed N'ihi gaje Dog Nwe
site Jon Katz
emelitere ikpeazụ: Ka. 21 2020 | 7 min agụ
* Get nkịta na ị chọrọ.
Imegbu ụmụ anụmanụ n'ozuzu, na nkịta akpan akpan, emewo nza nke nwe-na nkwenye na naanị omume nhọrọ bụ ịzọpụta a na nkịta si a paụnd, ebe chere ya ihu euthanasia. O nwere ike ịbụ a ahụmahụ magburu onwe iji napụta a nkịta (m napụtara ókè collie Orson na-agha ụgha n'okpuru m oche), ma, dị ka nkịta nwe onwe ya, ọ bụghị maka na mmadụ nile. Ọ nwekwara ike ịbụ ahụmahụ dị ịchọta a oké nkịta si ezi breeder. M abụọ nke ndị na-, nakwa: otu ìgwè ehi atụrụ na-agba m ugbo, na Kacha ọhụrụ, Clem, suffuses n'ụlọ m na ndụ na-atọ ụtọ mkpakọrịta. M ọchị fọrọ nke nta oge ọ bụla m na-ele ya. Ọ dịghị onye pụrụ ekpebi ihe ụdị nkịta unu kwesịrị iji nweta, N'ezie, ọ bụghị m. Ị na-elekọta ya, otú ahụ onye na ị ga-n'anya.
Ma na-eme gị rụọ n'ụlọ. N'agbanyeghị na ibu ụzọ chebara, ọ na-anọgide ihe a crapshoot. Nkịta zụtara na Pita na-echekwa yiri si nwa nkita igwe elu-olu ozuzu arụmọrụ ebe inbreeding emepụta na-eme ike na temperament nsogbu. Dị ka ọmụmụ hotara nchịkọta akụkọ James Serpell na ya ibe J. A. Jagoe na The Domestic Dog, nkịta enwetara site na Pita na-echekwa na-ọtụtụ ihe ndị ọzọ yiri ka igosipụta na-elekọta mmadụ na-atụ egwu na dominance-ụdị ime ihe ike karịa nkịta si breeders ma ọ bụ echebe. Ọtụtụ nnapụta na ndo nkịta nwere nsogbu akparamàgwà, site mba kpatara nke ha onwe ha. Ha na a na-emegbu, mkpasasị uche, ma ọ bụ ugboro ugboro re-homed, ruo n'ókè nke na, dị ka University nke Pennsylvania School nke ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ Medicine, ha na ọtụtụ ihe ndị ọzọ yiri ka nwere nsogbu dị ka riri Lonely, mbuso agha, barking, iribiga nri ókè, na ihe ụmụ mmadụ na-oku “nkewa nchegbu,” karịa purebreds si àgwà breeders.
Ịrụ Ọrụ Dịịrị nnapụta dị iche iche na ndo ọrụ ọ bụghị nanị na-ekweta na nke a ma jide n'aka na adopters ịghọta ya, nke mere na nkịta adịghị ibiaghachi azụ ma ọ bụ, njọ, -emegbu ma ọ bụ imerụ ndị ọzọ. Ma, m na okosobode ụfọdụ ọrụ nnapụta nweta na ahuhu na raara onwe ya nye ndị nọ ná mkpa nkịta ndị na-kwa-achọsi ike ịkpali ime ihe ike ma ọ bụ nsogbu nkịta n'ime mainstream obibi. Na ọbụna nkịta si akọ na uche breeders na-akpụzi nne ha na ụmụnne, nke na ụfọdụ ndị na-mebiri emebi, na-atụ egwu, na cowering, mgbe ndị ọzọ na-amụta enem atụkwasị obi. Ụbara unscrupulous ma ọ bụ anyaukwu breeders uka-emepụta nkịta n'ihi ịchọ mma ma ọ bụ azụmahịa ihe, na-enweghị banyere ahụ ike ma ọ bụ akụkọ ihe mere eme temperament. Ebe ọ bụ na nkịta eluigwe na ala bụ fọrọ nke nta kpamkpam unmonitored na unregulated site ọnụ, underfunded obodo ọchịchị, ndị chọrọ nkịta bụ n'ezie na ha onwe ha. Ọ bụ ya mere na ọ bụ ezi echiche ịjụ breeders na nnapụta iche iche n'ihi na e zoro aka na, otú ị pụrụ ịhụ otú ha ọzọ nkịta na-arụ ọrụ si.
Ọ bụ dicey ka nkịta nhọrọ a omume ma ọ bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị omume. Mara na ọ bụrụ na ị na-ahọrọ a nnapụta nkịta, ọ nwere ike dị mkpa karịsịa ndidi na nkà. Ọtụtụ nkịta nwere ike zụrụ ma ọ bụ retrained, ọbụna na okenye afọ, ma ọ bụrụ na ị na-adịghị njikere ma ọ bụ ike ime ka ndị na-agbanwe agbanwe nkwa nke oge na-arụ ọrụ, a dị iche iche ụdị nkịta nwere ike ona ị ka mma. Inweta a purebred nkịta mgbe e nwere ọtụtụ ndị nọ ná mkpa nkịta na echebe ka na-, m n'obi, a zuru okè nti nhọrọ, na mgbe ụfọdụ ka mma.
* Impulsiveness bụ gị kasị njọ onye iro mgbe ọ na-abịa na-eweta a nkịta n'ime ụlọ gị.
Were oge ị chọrọ. Unu ikpebi na a nkịta n'ihi na unu hụrụ onye ị mmasị na a TV show ma ọ bụ na-eje ije n'okporo ámá. Ma ọ bụ na iju gị ụmụaka, ma ọ bụ gị efu nesting nne na nna, ma ọ bụ n'ihi na unu nụrụ a ìgwè bụ smart. N'ókè collies bụ smart, ma ha na-eme egwu nzuzu ihe, dị ka na-agbalị enyí mkpofu gwongworo. A smart nkịta bụchaghị a oké Pita, agbanyeghị. M bụ ọ turu ma ọ bụ nkà ihe ọmụma mgbe Orson achọpụtabeghị otú na-emeghe na friji na-ewepụ ihe dum ọkụkọ.
* Lower gị na-atụ anya.
The pups frolicking na lawns na nkịta-nri mkpọsa ngwá ahịa mara mma, ma emegide ndị unu ga-enweta a n'ezie nkịta. Real puppies nwere ihe mberede n'oge housebreaking ọzụzụ, ndudue carpets maka lawns, na-ata ihe ndị ị na-akpakọba. Real nkịta tụgharịa na mgbada scat na mgbe ahụ hop n'elu ihe ndina. Ha kwesịrị gbaa na ọgwụ; ha na-arịa ọrịa.
Real nkịta nwere ike mgbe na-ukwuu nke a ohere agbụ n'akụkụ gị site na ogige. N'ihi na ọtụtụ nkịta na-otú merụsịrị zụrụ, ha na-eme ndị na-abụghị nkịta hụrụ na-esiwanye erughị ala. Cops niile ná mba dee tiketi maka ndị na-eje ije nkịta Mmetụta. Dog nwe ina sued n'ihi ha anu ulo’ ọtịta, ọbụna n'ihi menacing omume. Insurance ụlọ ọrụ na-esiwanye elele ịhụ nke ìgwè nke nkịta na ị nwere, na ịkagbu atumatu ma ọ bụrụ na ha na-adịghị mma. Ụfọdụ anụmanụ na-ikike dị iche iche kweere nkịta e kwesịrị ukwuu iwu ọnọdụ, fọrọ nke nta hà na ụmụ mmadụ '. Ụfọdụ ekweghị na ụmụ mmadụ ga-ekwe ka “onwe” a nkịta na niile. Ma ò Theory nke Dog Ọzụzụ na-emesi ike ibu ọrụ nke nwe.
* Na ibu ọrụ ndị a pụrụ iyi unremitting.
Nkịta mkpa pụọ ​​ọbụna mgbe ọ na-agbapụtara na-na. Ha chọrọ nlebara anya, n'anya, mmalite, na ihe omumu, ọbụna mgbe ị na na na na na na ike gwụrụ, arụsi ọrụ, ma ọ bụ na ọnọdụ. Ha mkpa ha adịghị abate mgbe ị chọrọ a izu ụka ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị na-anọ n'oge na ụlọ ọrụ.
Asian nkịta hụrụ na-atụ anya nsogbu ndị a na ịnyagharịa ha na-akpa ọchị na ndidi. Na nloghachi, ha ga-esi ịhụnanya dị ukwuu, fun, na-akpakọrịta. E nwere esemokwu na ụgwọ ọrụ ọ bụla na mmekọrịta, mmadụ ma ọ bụ canine. M kweere na-ewere a ogologo echiche mgbe ọ na-abịa nkịta. Ị chọrọ ịhụ gabiga oge, karịsịa mgbe ị na-n'ala na atọ A.M. dabbing na kapeeti na Nature 's Ọrụ Ebube, agbalị wepụ ísì. The ogologo ele nanị na-abịa na ịghọta ọdịdị nke ụmụ anụmanụ ndị a, na ịnakwere na ọbụna na oké mgbalị ha ga-bụghị mgbe niile ntupu na anyị.
* Kpachara Anya Maka na ọjọọ ngọpụ.
Dị nnọọ a afọ iri gara aga, nkịta ndị ka na- “nakweere,” bụghị “napụtara,” ọbụna ihe ọzọ n'ụzọ mmetụta uche ebubo echiche. More nkịta nwe karịa m nwere ike ịgụ now ịme ma ọ bụ na-akọwa ha nkịta na nkebi ahịrịokwu ahụ: “Ọ nọ na-eleghị anya emegbu.”Mgbe m jụọ ha otú ha maara, ndị na-egosi bụ mgbe eleghị, na mma.
Kpachara anya ma ọ bụrụ na ọchịchọ ịzọpụta a na nkịta si ọjọọ bụ isi ihe mere na ị chọrọ otu. E nwere nza nke ụzọ iji gosipụta ndi mmadu na-mmetụta ọmịiko, n'ihi na ndị mmadụ ma ọ bụ anụmanụ, ma nke a karịsịa anụmanụ na-akpụ akpụ n'ime ụlọ gị. Ọ bụrụ na ị na-aghọtahie gị onwe gị nzube ma ọ bụ mee ndị na-ezighị echiche, ma nke ị ga-anagide ihe ndị kpara ruo ọtụtụ afọ.
Steven R. Lindsay, ya seminal mpịakọta abụọ Akwụkwọ Nkọwa nke etinyere Dog Àgwà na Ọzụzụ, explores echiche mere banyere ihe na nnweta nke nkịta. Egwu mmadụ na kọntaktị na ndị ọzọ na avoidance àgwà ụfọdụ a pụrụ esi ná nne agụ gara aga na-emegbu, Lindsay na-ekweta. Ma ndo ọrụ na-adị ngwa-akpọkukwa na nkọwa mgbe ha na-agwa gaje adopters, enweghị ebe ọ maara ma ọ bụ ezi. “Obi abụọ adịghị ya, anụ ahụ na nke mmetụta uche n'ụzọ pụtara na ike a dị ịrịba ama na-akpata egwu,” Lindsay ede. “Otú ọ dị, ikekwe ọ pụtara nnọọ obere mgbe karịrị otu nwere ike na-atụ anya site ugboro nke ndị dị otú ahụ na-akọ.”
Ebe ọ bụ na nkịta ike idozi anyị, ma ọ bụ mkpesa banyere nne na nna ha, ọ bụ ihe dị mfe iche na ha na ndị mmadụ obi ọjọọ, otu echiche na-ekwukwa mgbe mgbe dabara anyị onwe anyị mkpa mmetụta uche na akụkọ. Ma mkpụrụ ndụ ihe nketa, inbreeding, na ọnọdụ na a-awụba n'oké osimiri, n'etiti ihe ndị ọzọ, nwekwara ike profoundly mmetụta a na nkịta. Ọtụtụ mgbe, dịghị mgbe anyị ga maara n'ezie a eziokwu na ike gosi na-erughị afọ ojuju karịa a nnapụta fantasy. Ị ga-n'anya a na nkịta ihe dị ukwuu ma ọ bụrụ na ị maara na ọ bụ na-atụ egwu n'ihi na ọ bụ insufficiently mmeko dị ka a nwa nkita?
* Nwee obi abụọ nke onwe gị na-atụ anya skepticism na ndị gị na-na-na na nkịta si.
Ezi breeders na akọ na uche nnapụta na ndo ọrụ ga-nọgide gị chọrọ n'ihi na a na nkịta, ọbụna ruo n'ókè nke obnoxiousness. Ha ga na-ajụ banyere gị oge, yad, nsu, ụmụaka, nkịta-owning ahụmahụ na ha kwesịrị. N'ezie, ma ọ bụrụ na ha na-eme ọ bụghị, ewere ya dị ka ịdọ aka ná ntị na-egosi na i nwere ike na-achọ a nkịta na-ezighị ezi ebe. N'ihi ya, ọtụtụ ndị mmadụ mara ihe banyere nkịta mgbe ha ga-esi otu ma ọ bụ ndị dị otú ahụ ezi uche na-atụ anya na ọtụtụ nde nkịta na-emeso ha mmeso ọjọọ, laghachiri, ma ọ bụ hapụrụ onye ọ bụla n'afọ. Ndị mmadụ na ndị na-ekesa ha hụrụ a otutu, ukwuu mgbe ụfọdụ. Ị gaghị achọ a na nkịta si onye ọkụ n'obi na-enye ma ọ bụ na-ere gị onye na-enweghị na-arịọ ụfọdụ siri ike ajụjụ.
* Mara onwe gị.
Ndị mmadụ na-agbasaghị ụta nkịta mgbe nsogbu bilitere, kama ha bụ ndị fọrọ nke nta mgbe ayi kpatara. Ma ọ bụghị na anyị mere a ogbi nhọrọ (eweta a huskie ka a ogige na Boca Raton), ma ọ bụ na anyị adịghị n'ezie nwere oge na àgwà na-azụ a na nkịta, ma ọ bụ anyị gbabara fantasies. Ọ dịcha ka, na ị na-na-a nkịta n'ihi na ị chọrọ ma ọ bụ na-achọ ihe na-n'anya, ma ọ bụ ihe ọzọ n'anya, ma ọ bụ n'ihi na ị ga-amasị dochie ihe ị hụrụ n'anya na-adịkwaghị. E nwere ihe ọjọọ ma ọ bụ nsogbu banyere na, ma ọ nkịta ọ na-ejere ịbịachi ma ọ bụ agọnahụ ya site na-esi ọnwụ, “M nwetara a nkịta maka ụmụaka” ma ọ bụ “M nnọọ nwetara ya na-burglars pụọ.”
Ma ka ọchịchọ n'anya karịrị ọzọ e ji mara? Ị na-ime? Ị nwere a elu ndidi n'ihi mkpọtụ, aghara, na ọgba aghara? Ị na-agbata n'ọsọ dị ọcha rugs na ngwá ụlọ? Ma ọ bụ na-ehi ụra n'oge na Sọnde? Ị iwe mfe? Inweta a nkịta bụ nnukwu, oké ọnụ, -agbanwe ndụ mkpebi na-emetụta gị ruo ọtụtụ afọ.
* Nkịta na-adịghị mmadụ, na-echeta. Ha adịghị eche na na mmadụ okwu ma ọ bụ okwu.
Ha nwere ike ịgwa akụkọ, na-eso akụkọ, na-agụ anyị uche (ọ bụ ezie na ha na-eme chọpụta na anyị ọnọdụ uche). Ha na-adịghị “ụmụaka na ajị anụ,” ma ọ bụ ụmụ na niile. Anyị nwere ike ịhụ ha n'anya ọnwụ, ma nke ahụ apụtaghị na ha na-dị ka anyị. N'ezie, kasị nkịta nwe ha n'anya n'ihi na ha na-agaghị na-amasị anyị. Iji agọnahụ ha dogness bụ a disservice ma umu. Ichefu na ha bụ ndị ụmụ anụmanụ, chụpụrụ n'ụzọ dị ukwuu site instinctual ọchịchọ maka onye ọ bụla ọzọ na nri, mmekọahụ, na uche, bụ ịgbanwe eziokwu nke ha na obu, na imebi ha.
* Nkịta na-adịghị na-agwọ ọrịa, ma.
Mmekọrịta gị na nkịta ga-abụ na-emetụta na-akpụzi gị onwe gị akụkọ ezinụlọ na nke mmetụta uche n'oge gara aga, ma nkịta ikike ịgwọ ochie mkpasasị uche ma ọ bụ jupụta voids dị ụkọ. Ndị mmadụ ga-agwa gị na ha nkịta ịghọta ha na-eche na mara ha kasị nzuzo, ma adịghị kpofuru gị obi akpa on anụmanụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ enyemaka na nsogbu, isi ma ọ bụ obere, weta ya. Ọ bụrụ na gị na nkịta aghọta gị mma karịa di gị ma ọ bụ nwunye, enye nkịta a ọkpụkpụ, mgbe ahụ na-aga ịhụ a ndụmọdụ alụmdi na nwunye, ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ nwere ụfọdụ mkparịta ụka na nwunye gị. Unu ịjụ gị nkịta eme gị obi ụtọ ma ọ bụ na-emeso gị ịda mbà n'obi. Gị nkịta echiche eleghị anya hiwere isi na mgbe ị na-aga na-apụ gị butt na-eri nri ya.
* Nkịta na-esiwanye a hụrụ ka sagacious mmụọ na prescient mkpụrụ obi.
The ò Theory adịghị ịzụta ya. The mfe ka mmekọrịta gị na a nkịta, mma, n'ihi na nkịta ndị dị mfe. Ha hụrụ iwu, eme ma doo anya, na-edu ndú, na-akpali akpali na-esi isi, ọzọ nkịta, na, n'ezie, nri na ndị na-enye ya. Otu n'ime cornerstones nke ò Theory: Gị nkịta bụ crazy banyere gị, ma ọ pụkwara ịmụta n'anya fọrọ nke nta onye ọ bụla ọzọ na-ejide a bred e tinyere anụ.
* A bedrock echiche nke m obibia bi na nkịta anyị bụ na anyị mkpa ịdị na-ezi uche, mgbanwe, na onye okike, ike na ndị mmadụ ma mfe na nkịta.
Na-atụ anya a otutu onwe gị na okwu nke ndidi, mkpebi siri ike, ma na-anọgidesi. Dị ka na ị bụ, nkịta ga-eso uwe. Gbalịa ka ị ghara iche echiche, na okwu nke “ezi” na “ọjọọ” nkịta. Ndị a bụ ụmụ mmadụ notions na anaghị emetụta na ụmụ anụmanụ. Enwere, kama, nkịta na ịghọta otú ibi ndụ n'ime ụwa na nkịta na-adịghị. Mgbe ụfọdụ, nkịta ndị na-apụtụghị-eme ihe ike, genetically mebiri emebi, ma ọ bụ mmeso ọjọọ mmekwata. -Enye obi ụtọ, ha na obere.